Zụọ ahịa ma ọ bụ PrestaShop, nke ikpo okwu dị mma maka ecommerce gị | ECommerce ozi ọma
Ugbu a, abụọ n'ime nyiwe kachasị mkpa na ọ dị adị iji mepụta azụmahịa E-azụmahịa ma ọ bụ azụmahịa eletrọniki. Ha bụ ibe weebụ nke Zụọ ahịa ma ọ bụ PrestaShop, usoro kachasị mkpa ma jiri rụọ ọrụ.
Enwere ọtụtụ mkparịta ụka banyere Kedu ikpo okwu kachasị adaba ma ọ bụ kacha mma ịbanye ụwa nke azụmahịa E-azụmahịa.
Ọrụ abụọ a na-enye ngwaọrụ dị mma na njirimara ndị dị mkpa ka anyị wee nwee ike ịmalite ọrụ azụmahịa na nnukwu ohere nke ịga nke ọma.
Otú ọ dị, dị ka ụdị nke na-ere, ikpo okwu ọ bụla na-enye anyị ihe pụrụ iche na njirimara nke ahụ ga - eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma iji rụọ ọrụ anyị n'ịntanetị.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe ndị bụ isi na njirimara bụ isi nke nyiwe abụọ a.
Na anyị nwere ike itu iche iche ihe ga-abụ nhọrọ kachasị mma ịbanye ụwa nke ịntanetị.
1.1 N'etiti atụmatụ ya na uru ya
1.1.1 More Atụmatụ PrestaShop
2.1 N'etiti atụmatụ ya na uru ya
2.1.1 More Shopify Atụmatụ
3 PrestaShop ma ọ bụ Shopify
3.1 Uru na ọghọm nke PrestaShop ma ọ bụ Shopify
4 Anyị nwere ike ikwu maka PrestaShop ma ọ bụ Shopify
Prestashop bụ usoro e-commerce nke oru na 2007. Iji ghọọ na a nnọọ obere oge otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ahịa na otu n'ime ngwọta kacha mma maka azụmahịa E-azụmahịa.
N'ụzọ dị otu a taa nwere ihe karịrị ụlọ ahịa ntanetị 165.000 kesara gburugburu mba 195, ma jikwaa ihe karịrị asụsụ 60 dị iche iche.
N'etiti gị isi atụmatụ na uru
Ebe ikpo okwu na-enye anyị ohere ijikwa ọrụ niile dị mkpa nke azụmahịa E-azụmahịa, dịka ndị ahịa na ịzụ ahịa, yana katalọgụ na njikwa ịkwụ ụgwọ.
PrestaShop nwere a - CMS usoro mmeghe, Ekele nke ọ na-enye anyị ohere ibudata, wụnye ma hazie ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị kpamkpam n'efu.
N'ime ọrụ ya dịgasị iche iche, ọ na-enye anyị ohere họrọ site na ihe ruru 1500 dị iche iche ndebiri, nke mere na anyị nwere ike mgbe niile nwere ihe ndị kasị mma imewe na-enye anyị ngwaahịa.
Ọ bụ software na-agbanwe agbanwe maka ndị ọrụ dị iche iche, ma na-enye obere oriri nke sistemụ usoro ebe arụnyere ya, njikwa ya bụ 100% na-emezi na nke a na-emezi.
More atụmatụ nke PrestaShop
N'etiti ọtụtụ uru ya, ọ nwere ọrụ ndị ahụ ka anyị hazie URL, yana ịmepụta aha na aha. E wezụga na anyị nwere ike ijikwa kensinammuo interface nke ga-adị mfe ma dị mfe iji.
Maka ịrụ ọrụ ya ziri ezi. Naanị ihe ị ga-achọ bụ Sava weebụ Apache 1.3, ma ọ bụ mgbe e mesịrị, nke ga-eme ka anyị jiri usoro gị rụọ ọrụ nke ọma, nke na-enye anyị ihe ruru 310 ọrụ dị iche iche.
Na-enye anyị ohere - jikwaa ojiji nke mmekọrịta ndị ahịa, yanakwa iwu na ọnụ ọgụgụ dị elu.
O nwekwara uru nke jikwaa ahia maka azụmahịa E-azụmahịa gị, dị ka nkwalite na arụmọrụ pụrụ iche.
Inata ugwo, PrestaShop na-eme ka ịmekọrịta ụlọ ahịa nke ụlọ ahịa ga-ekwe omume. Site na nke anyị nwere ike ijikwa ihe dị iche iche: VAT, ego, asụsụ na data.
Shopify bụ ụlọ ọrụ Canada nke dị na Ottawa, malitere na 2004, nke ị nwere ike ịhazi ịkwụ ụgwọ ịntanetị na usoro dị iche iche nke ire ere.
Ugbu a ọ nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 600.000 dịnụ site na iji nyiwe ya. Ihe karịrị otu nde ndị ọrụ na ahịa ndị ruru ihe ruru nde dollar 63.000. Nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime nyiwe kachasị maka ndị ọchụnta ego gburugburu ụwa.
N'etiti atụmatụ ya na uru ya
Iji nke a sọftụwia na - enye anyị ohere ijikwa azụmahịa anyị ruo ndebiri 100 dị iche iche. Kedu nke bụ ezigbo ngwaọrụ iji kwado atụmatụ niile dabara adaba maka ụdị ngwaahịa a na-ere. N'otu aka ahụ, anyị nwekwara ike iji atụmatụ nke aka anyị.
Ogwe njikwa ọ na-ejikwa zuru oke ma na-arụ ọrụ nke ọma.l, nke na-eme ka o kwe omume n'oge ọ bụla iji mepụta onyinye dị iche iche ma ọ bụ tinyekwa ngwaahịa ọhụrụ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
El Ọrụ nkwado ahịa na-arụ ọrụ 24 awa ụbọchị, Ụbọchị 7 n'izu, iji nyere anyị aka ma kwado anyị ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nchegbu ọ bụla. Iji rịọ maka ọrụ a, anyị nwere ụdị nnweta dị iche iche. Ma ọ bụ kpọọ ndị ọkachamara pụrụ iche ma ọ bụ zipụ ozi email ebe anyị gosipụtara obi abụọ anyị niile.
Shopify na-eme ka o kwe omume hazie akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahịa ahụ n'ụzọ dị mfe ma dị irè. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịkwado anyị mgbe niile na azụmaahịa anyị n'ịntanetị anaghị eweta ụdị nsogbu ọ bụla. Ebe ọ bụ na ikpo okwu a na-emekwa ka o kwe omume ịmepụta ngwa ngwa blog dị iche iche.
More atụmatụ nke Shopify
Ọ nwere a ndị ọrụ ruru eru na ndị a zụrụ nke ọma, iji duzie ndị ahịa nzọụkwụ site nzọụkwụ. Yabụ ị nwere ike ịhazi ụlọ ahịa gị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Na Shopify, ị nwere ike nata ego n’ime ihe ruru ego iri asaa. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịre ahịa na mba ndị kachasị azụ ahịa n'ụwa, na-enweghị nchegbu gbasara otu esi ebu ọnụego mgbanwe. Karịsịa, na-enweghị ndị ahịa inwe nsogbu gbasara nsogbu ndị a. Nke a ga - enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju na iguzosi ike n'ihe nye azụmahịa anyị, site na ịnwe ọmarịcha ọrụ, ụdị ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ yana ntụkwasị obi nke ikpo okwu na-enye usoro azụmahịa ya dị mma
La mfe interface Iji akaụntụ Shopify, ọ na-eme ka o kwe omume ijikwa ngwaahịa dị mfe, nke mere na anyị nwere ike ibugo foto mgbe niile, gbakwunye ngwaahịa ọhụrụ, dezie ngwa ahịa anyị na ọtụtụ usoro ndị ọzọ. Nke ga-enyere anyị aka ịchụ ahịa anyị dịka ezigbo ndị ọkaibe. Ke adianade do, o nwere asụsụ mmemme "Liquid", naanị maka Shopify
Shopify nwere ezigbo ngwaọrụ maka ijikwa azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị, nke mere na a ga-enyocha ọnọdụ nke iwu niile. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike nyochaa akụkọ zuru oke nke iwu, iji nwee mmekọrịta kachasị mma na ndị ahịa ma duzie mkpọsa ahịa kwesịrị ekwesị.
Shopify na-enye a 14 ụbọchị ikpe n'efu, zuru ezu ka anyị wee nwee ike iji uru kachasị mma nke ikpo okwu a na-akwụghị ụgwọ. Ya mere, anyị nwere ike ịme mkpebi anyị na-enweghị nkwa ego, jiri nwayọ yana uru ya niile agụwororịrị n'oge oge ikpe.
PrestaShop ma ọ bụ Shopify
Họrọ usoro ntanetị kacha mma e-commerce n'etiti Prestashop ma ọ bụ Shopify Ọ bụ echiche nwere ike isi ike ma ọ bụrụ na ebumnuche ya bụ ebumnobi.
Eziokwu bụ na maka kọwaa nhọrọ kacha mma, onye ọrụ ga-ebu ibu dị ka profaịlụ nke ha.
Kedu nke bụ ikpo okwu nke na-enye gị ezigbo ngwaọrụ ma nye gị nnukwu elele na elele dị elu n'ihe metụtara iji ịchọrọ iji ya.
Ya mere, n'okpuru anyị ga-eme a nyocha nyocha n'etiti ikpo okwu abụọ, na-ekwu banyere uru na ọghọm nke onye ọ bụla na ibe ya.
Uru na ọghọm nke PrestaShop ma ọ bụ Shopify
Maka ebumnuche SEO (njikarịcha njin ọchụchọ), ọ maara na Shopify anaghị agbanwe agbanwemgbe PrestaShop na-eme ka nhazi dị mma nke e-commerce na engines ọchụchọ.
N'ihi isi mmalite ya, PrestaShop na-enye ohere ngbanwe dị mfe na nhazi maka ndebiri karịa nke ị nwere ike ime na Shopify. Nke a abughi na n’enye nsogbu kariri ime mgbanwe, kamakwa, n’oge ụfọdụ ọ ga - ekwe omume ịme ya site na ngwa nwere ụgwọ ọzọ.
Dabere na data nke ngwa GetApp nyere, Shopify na-enye njikọta ihe ruru 252 ikike ịre ahịa ntanetị, mgbe maka akụkụ ya, PrestaShop na-ejikọtaghị ọnụ na 54 nke nyiwe ndị a.
PrestaShop bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, (ị ga-akwụrịrị obere ego maka nnabata), mana n'ihe banyere Shopify, ọ bụrụ na ọ nwere ụgwọ kwa ọnwa nke dabere na atụmatụ nkwekọrịta ahụ.
Ma PrestaShop na Shopify nwere ezigbo ọrụ nkwado maka onye ahịa. Otú ọ dị n'ihe banyere Zụọ - na mgbakwunye na ọrụ ekwentị, yana nwere ihe integrated online chat iji zaa ajụjụ awa iri abụọ na anọ n’ụbọchị.
Mgbe ị na-eme atụmatụ nke Shopify, nke a na-ebo ebubo ọrụ n'otu azụmahịa. Mgbe maka ire, PrestaShop anaghị etinye ụdị ụgwọ ọ bụla.
Anyị nwere ike ikwu banyere PrestaShop ma ọ bụ Shopify
Mgbe ị tụlechara isi ihe na atụmatụ gburugburu abụọ n'ime ikpo okwu E-azụmahịa kachasị mma nke dị taa.
Anyị nwere ike ikwu na Enweghị onye mmeri doro anya, dị ka o doro anya na àgwà kachasị mma nke ngwanrọ abụọ ahụ ga-eji ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ.
N'ihi ya, ọ bụ ezie na ụfọdụ ga-achọta mfe na mgbanwe karie ojiji nke PrestaShop, ndị ọzọ ga-enwe ekele maka ọtụtụ atụmatụ na mwekota ị nwere ike ịchọta na Shopify n'agbanyeghị ego mbụ ọ na-anọchi anya ya.
Usoro abụọ a bụ ezigbo ngwaọrụ maka ndị ọchụnta ego na-abanye ụwa nke azụmahịa e-commerce maka oge mbụ.
Eziokwu bụ na mkpebi ikpeazụ nke otu ga-emecha dabere na ebumnuche ndị ịchọrọ ịme, ma ọ dị obere, ọkara ma ọ bụ ogologo oge. Ha ga-adị mkpa ma a bịa mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, nke nwere ike ịbụ azụmahịa dị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwado nke PrestaShop ma ọ bụ Shopify.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Zụọ ahịa ma ọ bụ PrestaShop, nke ikpo okwu dị mma maka ecommerce gị